Amakhasino Aphezulu Aku Top-20 | Amakhasino aphezulu aseNingizimu Afrika
Ikhaya / amakhasino e-inthanethi emali yangempela aseningizimu afrika
Amakhasino E-Inthanethi Emali Yangempela Aseningizimu Afrika
Iqiniso ngukuthi amakhasino e-inthanethi emali yangempela akhona yonke indawo kulezi zinsuku futhi akusho ukuthi akuzona zonke lezi zindawo okufanele uzivakashele. Isithunzi sewebhusayithi mhlawumbe siyinto eyodwa ebaluleke kakhulu okudingeka uyicabangele, kepha kunezinye izinto eziningi ezibalulekile okufanele uzicabangele phakathi nenqubo yokukhetha amakhasino e-inthanethi angcono avumela ukuthi abantu badlale ngemali yangempela.
Abadlali baseNingizimu Afrika bangabhekana nomsebenzi onzima kakhulu uma beqhathaniswa nabadlali abavela kwamanye amazwe njengoba bedinga ukuqinisekisa ukuthi indawo yezemidlalo yamukela abadlali abavela kule ngxenye yomhlaba, ngenkathi futhi isekela izinkokhelo ngeRandi laseNingizimu Afrika. Esikhundleni sokuchitha amahora angapheli usesha iwebhu ukuthola imininingwane ebalulekile, ungavele ubheke uhlu lwethu lwamakhasino e-inthanethi angcono aseNingizimu Afrika, oluqoqwe yithimba lababhali abanolwazi olunzulu embonini.
Amakhasino Emali Yangempela Ahamba Phambili ENingizimu Afrika
R350 Ama-No Deposit Bonus Amahhala + R11, 500 Ibhonasi Lokukwamukela
R350 Ama-No Deposit Bonus + 200% Ibhonasi ne 50 Izikhathi Zokudlala
Kuze kufike ku R15,000 + Idiphozithi engadingi ibhonasi
300% Ize ifike R6,000 + R300 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
R450 Ama-Ye bhonasi Elingadinigi Diphozothi + 200% Ibhonasi na 30 Yemijikelezo Yamahhala
675% Ibhonasi ne 150 Ama-Free Spins + R450 Ama-No Deposit Bonus Amahhala
Ize ifike R22,500 Ibhonasi + 300 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
R3,200 ne 100 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins + 5 ama-spins Ayikho Idiphozithi
R350 Ama-No Deposit Bonus + R10,000 Ibhonasi
R300 Ama-No Deposit Bonus
R450 Ama-No Deposit Bonus Amahhala + 750% Ibhonasi ne 110 Ama-Free Spins
300% ne 999 ama-spins + 100 ama-spins Ayikho Idiphozithi
300% ne 888 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins + 58 ama-spins Ayikho Idiphozithi
300% ne 777 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins + 30 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Ize ifike R3,000 Ibhonasi + 100 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
Ize ifike R15,000 Mahhala + 200 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
Ize ifike R15,000 Ibhonasi + 300 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
100% Ize ifike R3,300 ne 300 ama-spins + 20 ama-spins Ayikho Idiphozithi
Ize ifike R30,000 Ibhonasi + 150 Ibhonasi Lokukwamukela lama-Free Spins
Siluqoqe Kanjani Uhlu Lwamakhasino E-inthanethi Ahamba Phambili e-SA
Cishe akukho lutho abathandi bekhasino ye-inthanethi abakuzondayo ngaphezulu kokufuna ulwazi ngezindawo zemidlalo ukuthola ukuthi iwebhusayithi ethile ikufanele yini ukwethenjwa njengoba bengathanda ukuchitha leso sikhathi bedlala imidlalo abayithandayo yasekhasino. Njengoba besingabadlali bekhasino ngokwethu, siyazi kahle lokhu futhi yingakho sitshale isikhathi sethu nolwazi lomkhakha wezokudlala ku-inthanethi ukukupha umkhiqizo ophelile lohlu lwethu lwamakhasino e-inthanethi emali yangempela angcono kakhulu. Amanye ala makamelo ekhasino anikeza ukudlala mahhala njengendlela yokuvumela abasebenzisi ukuthi bahlole iwebhusayithi yabo ngaphambi kokufaka imali yabo engcupheni, kepha sizogxila ekudlaleni kwemali yangempela kule ndatshana.
Besingafuni ukuqala izibuyekezo zekhasino ngaphambili kokuhlola zonke izici zokusebenza kwewebhusayithi, futhi uma umsebenzi wethu ekugcineni usiza abadlali bekhasino abasuka eNingizimu Afrika ukuthola amakhasino e-inthanethi amahle azobaphatha ngenhlonipho futhi abanikeze isipiliyoni sokudlala esijabulisayo, sizowubheka njengesikhathi esisetshenziswe kahle.
Okokuqala besifuna ukuqinisekisa ukuthi ikhasino okukhulunywa ngalo liyahambisana nayo yonke imithetho ezweni lapho okukhishwe ilayisense layo lokudlala, nerekhodi eliqinisekisiwe lokulunga nokuphepha, esinye isici esibaluleke kakhulu kithina.
Izindlela eziningi zokubhenka mayelana nokudiphozitha nokukhipha imali kuyizinto wonke amakhasino amahle okumele zibe nakho, futhi njengoba sihlala sigxile kubadlali baseNingizimu Afrika, sinikeza amaphoyinti amanye kumakhasino akwazi ukwamukela Amarandi aseNingizimu Afrika (ZAR). Akusizi ukuba nezindlela ezingingi maqondana nezindlela zokukhokha uma kuzobiza imali eningi uma udiphozitha noma ukhipha umali, ngakho-ke sikucabangile lokhu.
Lapho idumela kanye nokubhenka kuphelile, bekuyisikhathi sokugxila kulwazi lokudlala uqobo, ikakhulukazi umhlinzeki wesofthiwe oyinhloko kanye nalabo abancane, nekhwalithi yelabhulali yomdlalo kudeskithophu nakuselula. Njengoba ukudlala ngeselula kuqhubeka kudlondlobala, uzofuna ukwazi ukuthi imidlalo yakho oyithandayo izotholakala uhamba ngalezo zikhathi uma ungakwazi ukufinyelela kukhompyutha yakho.
Ikhwalithi lamabhonasi okukwamukela lwabasebenzisi abasha kanye namabhonasi okudiphozitha kabusha namaphromoshini abadlali abakhona bekuyizinto esizithandayo, ngaphezulu kwezinhlelo zokwethembeka, amakilabhu e-VIP ezimemo kuphela, imiqhudelwano yemiklomelo eqinisekisiwe, kanye neminye imincintiswano eyenzelwe ukuklomelisa abadlali ngesenzo sabo ekhasino.
Ngemuva kokuhlola ngokucophelela zonke lezi zinto esesizibalile, ababhali bethu bathole isilinganiso sokugcina sekhasino ngalinye elisisize ukuba sibhale amakhasino e-inthanethi ahamba phambili eNingizimu Afrika, futhi sethemba ngobuqotho ukuthi uzokwaneliseka ngomkhiqizo.
Imishini Yokugembula Yangempela (Money Slots)
Iningi lamakhasino e-inthanethi aseNingizimu Afrika ajwayele ukuba nemidlalo ebizayo yemishini yokugembula ekudala yaba yisigaba esihamba phambili kuzikhungo zokudlala ze-inthanethi. Lokhu akunzima kangako ukukuqonda uma sazi ukuthi abahlinzeki besofthiwe abahamba phambili njenge- Net Entertainment, i-BetSoft, i- Playtech, i-Microgaming, ne-NextGen bakhipha imidlalo emangazayo cishe njalo ngenyanga, ngakho-ke ngaso sonke isikhathi sinikeza abathandi bekhasino izizathu eziningi zokuqhubeka nokudlala bedlala.
Nakuba abasebenzisi abathobekile abaningi bejabulela imishini yokugembula yakudala efana naleyo etholakala emakhasino eLas Vegas Strip, abadlali besimanje bajabulela imidlalo ecebe ngezici iphinde ibe nezihloko zamafilimu athandwayo, amafilimu e-TV, ezemidlalo, noma izinganekwane, ezikhangayo futhi inikezela ngamathuba amaningana okuwina okuningi.
Ngemishini yokugembula engaphezulu kwengu-1,500 ekhona manje nemidlalo emisha eyengezwayo njalo ngenyanga, akulula neze ukuthola imidlalo eyishumi nambili noma lokho okuzokukhanga, kepha iseluleko sethu ukuthi uhlale uhlola amaphesenti akhokwa umdlalo noma abuyela kumdlali, kanye nezinye izinto ezimbalwa ezifana nezinkokhelo zomdlalo oyinhloko, amabhonasi, ikhwalithi yezithombe kanye nobubanzi bokubheja.
Ngibhalisela kanjani i-akhawunti yemali yangempela?
Ungalandela noma yiziphi izixhumanisi eziboniswe ohlwini lwamakhasino e-inthanethi ethu amahle kakhulu kubantu baseNingizimu Afrika noma ubhalise ngqo kuwebhusayithi yekhasino. Ngemuva kwalokho uzocelwa ukuthi ufake imininingwane yakho kanye nemininingwane yezezimali, yonke inqubo yokubhalisa ithatha imizuzu embalwa. Ngemuva kokuthi i-akhawunti yakho iqinisekisiwe, uzokwazi ukwenza idiphozithi yakho yokuqala bese uqala ukudlala.
Yiziphi izindlela zokukhokha engingazisebenzisa?
Lokhu kuya ngekhasino oyikhethayo, kepha amawebhusayithi amaningi amukela Amakhadi Esikweletu, Ukudlulisa Imali Ngebhange, nama-e-wallets athandwayo. Futhi abadlali bayakwazi ukusebenzisa i-ZAR.
Asebenza kanjani amabhonasi okukwamukela?
Iningi lamabhonasi okukwamukela azoklonyelwa lapho wenza idiphozithi yakho yokuqala, ikhasino lizofaka imali yebhonasi wekheshi elingana nemali oyidiphozithile, evamise ukuba phakathi kwamarandi angu-10,000 kuye kwangu-60,000. Khumbula ukuthi imali yebhonasi izotholakalela ukuyikhipha kuphela uma uhlangabezana nezidingo zokubheja ukuze ukhiphe imali, ngakho-ke qiniseka ukuthi ufunda imigomo nemibandela yebhonasi ngokucophelela ngaphambili kokubhalisela i-akhawunti.
Kungani ngicelwa ukuthi ngiqinisekise ubuwena?
Nakuba amakhasino amaningi ezokuvumela ukuthi uvule i-akhawunti bese udiphozitha imali ungafakile noma yibuphi ubufakazi bokuthi ungubani, azokucela ukuthi uqedele inqubo yokuqinisekisa lapho ukhipha imali kokuqala. Lokhu kwenzelwa ukuvimbela i-money laundering, kepha asikho isidingo sokukhathazeka. Ungakhombisa ngokushesha ubuwena ngokufaka isithombe esikeniwe sepasipoti yakho, i-ID, ilayisense lokushayela, noma enye into idokhumenti. Udinga ukwenza lokhu kanye kuphela bese konke ukukhipha kwemali kwakho esikhathini esizayo kuzocutshungulwa ngokushesha.
Ingabe imali yami iphephile kumakhasino e-inthanethi?i?
Yebo. Amakamelo ekhasino ye-inthanethi athumela imigomo yokuphepha yakamuva ukuqinisekisa ukuthi izimali zakho ziphephe ngo-100% ngazo zonke izikhathi, ngenkathi imininingwane yakho yangasese neyezezimali nayo igcinwa ifihliwe. Noma kunjalo, kukuwe ukudlala kuphela emawebhusayithi ahloniphekile aziqhayisa ngedumela elihle, uma ucabanga ukuthi kube nezimo lapho amakhasino angalungile ekhohlisa abadlali ukuze antshontshe imali yabo.
Ngingakwazi ukudlala imidlalo yekhasino ngeselula?
Yebo. Kulezi nsuku, amakhasino e-inthanethi abhekelela kakhulu amakhasimende abo angomahamba, okusho ukuthi amakhasino ahamba phambili kakhulu kubantu baseNingizimu Afrika kungenzeka abe ne-app yeselula noma iwebhusayithi yeselula esezingeni eliphakeme etholakala kunoma iyiphi ithebhulethi noma iselula ehlakaniphile. Umtapo wolwazi wonke womdlalo awutholakali kangako kumakhalekhukhwini, kepha, nokho, uzokwazi ukujabulela imidlalo embalwa emihle uhamba.
Ingabe kudingeka ukuthi ngifake isicelo sokujoyina uhlelo lokwethembeka?
Cha. Isikhathi esiningi uzongeniswa ohlelweni lokwethembeka lwekhasino ngokushesha lapho inqubo yokubhalisa isiqedile, okusho ukuthi ungaqala ukuthola amaphuzu okuthembeka ngokushesha bese kamuva uwashintshanisa ngazo zonke izinhlobo zezinto ezinhle. Amanye amakhasino afaka izinhlelo zesimemo kuphela, njengoba zinquma ukuthi ngabe umdlali ekulungele yini ubulungu be-VIP ngokuya ngenani lezikhathi ababheja ngazo.